Junior WIn | MoeMaKa Burmese News & Media
ဂျူနီယာဝင်း – လူတွေဖန်တီးခဲ့တဲ့ အနုပညာပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် Folk Art
ဂျူနီယာဝင်း – လူတွေဖန်တီးခဲ့တဲ့ အနုပညာပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် Folk Art (အတွေးအမြင် အမှတ် ၃၀၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၈) မိုးမခ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၈ Folk Art ဆုိုတာဘာလဲ။...
ဂျူနီယာဝင်း – Environment နှင့် ကမ္ဘာကြီးကို သင့်လက်ဖြင့်ကယ်တင်
ဂျူနီယာဝင်း – Environment နှင့် ကမ္ဘာကြီးကို သင့်လက်ဖြင့်ကယ်တင် (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၃၊ ၂၀၁၅ ရန်အောင်စာပေ အထက ၁၊ ရန်ကင်းကျောင်းရှေ့ ဆိုင်အမှတ် H ။ ၁၂...
ဂျူနီယာဝင်း – မိသားစုအတွက် ပျော်တော်ဆက်မဂ္ဂဇင်း ကျဆုံးခန်း
The Rise and Fall of PyawTawZet Family Magazine မိသားစုအတွက် ပျော်တော်ဆက်မဂ္ဂဇင်း ကျဆုံးခန်း ဂျူနီယာဝင်း မေ ၁၂၊ ၂၀၁၄ (အင်္ဂလိပ်လုိုရေးသားသော Walking Through the...
ဂျူနီယာဝင်း – အသက်နဲ့ လူတွေ
အသက်နဲ့ လူတွေ ဂျူနီယာဝင်း မေ ၄၊ ၂၀၁၄ ‘အသက်နဲ့လူတွေ’ ပါ။ ‘အသက်မဲ့လူတွေ’ မဟုတ်ပါ။ သူတို့မှာ ကျွန်မတို့လိုပဲ အသက်ရှိပါတယ်။ သူတို့ဆိုတာ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြီးဒဏ်ကြောင့် အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ရစရာမရှိအောင် ပျက်စီးသွားခဲ့ရသူတွေပါ။...
ဂျူနီယာဝင်း – မြန်မာနေ့ရက်များနှင့် ပန်းများ
မြန်မာနေ့ရက်များနှင့် ပန်းများ ဂျူနီယာဝင်း ဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၁၄ (Junior Win ရေးသားထားသောအင်္ဂလိပ်လုိုရေး Burmese Days and Flowers (Kindle Ebook), သုို့မဟုတ် Days and Flowers...
ဂျူနီယာဝင်း – အံ့ဖွယ် စတုရန်း
အံ့ဖွယ် စတုရန်း ဂျူနီယာဝင်း မတ်လ ၂၈၊ ၂၀၁၄ (Academic Weekly Educational Journal Vol3 No8 နှင့် Vol3 No9 တို့တွင်နှစ်ပတ်ဆက်တိုက် ဖော်ပြခဲ့သော Melencolia ပန်းချီကားအကြောင်းဆောင်းပါးဖြစ်သည်။)...
ဂျူနီယာဝင်း ဇန်န၀ါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၄ Jeffrey Sachs ရေးသားသော The End of Poverty အမည်ရှိ စာအုပ်တစ်အုပ်ထွက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။ ‘ဆင်းရဲတွင်းအဆုံးသတ်ဖုို့ ကျွန်တော်တုို့ ဘယ်လိုလုပ်နိုင်ကြသလဲ’’ ဟု ဆိုထားပါသည်။ ထိုစာအုပ်ကို...
ဂျူနီယာဝင်း ဇန်န၀ါရီ ၅၊ ၂၀၁၃ စာအုပ်အမည် – ဗုဒ္ဓဘာသာနည်းဖြင့် နေရကျိူးနပ်သောဘ၀ဖြစ်စေရေး ရေးသူ – ခင်မျိုးချစ် အင်္ဂလိပ်မူရင်း – Khin Myo Chit Title –...
လွဲမှားခဲ့သော အနာဂတ်တွက်ကိန်းများ – Junior Win
လွဲမှားခဲ့သော အနာဂတ်တွက်ကိန်းများ ဂျူနီယာဝင်း၊ နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၃ (မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေဖြစ်လာတာကတော့ယနေ့မျက်မြင်ပါပဲ။နောင်အနာဂတ်မှာ နောင်တစ်နေ့နေ့မှာ မဖြစ်နိုင် ဆိုပြီးပြောတာတွေကိုအနာဂတ်လူသားတွေက ယနေ့ခေတ်လူတွေကိုအခုလိုပဲ ထောက်ပြကြဦးမယ် ထင်ပါရဲ့) “to err is human” တဲ့။ လူဆိုတာ...
Junior Win – Who invented Telephone?
တယ်လီဖုန်းတီထွင်သူ ဘယ်သူလဲ ဂျူနီယာဝင်း၊ အောက်တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၃
Junior Win – Lost in Tranlation – Burma
ဘာသာပြန်ရခြင်းဒုက္ခ ဂျူနီယာဝင်း၊ အောက်တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၃ ကျွန်မသည် အင်္ဂလိပ်မှ မြန်မာဘာသာသို့ ဘာသာပြန်ဆိုရသည့် အလုပ်မျိုးကို တစ်ခါတစ်ရံတွင် အလုပ်သဘောအရ လုပ်ဖူးပါသည်။ သို့ရာတွင် ကိုယ်ဘာသာပြန်ရသည့် အကြောင်းအရာက ကိုယ်နှင့်ဘာမှမဆိုင်၊ ကိုယ်ကလည်း...
Days and Flowers of Myanmar – Junior Win ထွက်ပြီ မိုးမခစာအုပ်စင်၊ အောက်တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၃ စာအုပ်အမည် – Days and Flowers of...
Junior Win – Books in Museum
ပြတိုက်ထဲက စာအုပ်များ ဂျူနီယာဝင်း၊ အောက်တိုဘာ ၃၊ ၂၀၁၃ အမေဇုံမှာ ebookများထုတ်ခဲ့တာ အခုဆိုရင် အင်္ဂလိပ်လို၃အုပ်၊ ဗမာလိုတစ်အုပ်နဲ့ ကာမူးမိတ်ဆက် အခုထွက်တာပါဆိုရင် ၅အုပ်ရှိပါပြီ။ နောက်ပိုင်း အင်္ဂလိပ်လိုစာအုပ်များ ဆက်ရေးဖို့ ကြိုးစားပါ့မယ်။ အမေဇုံမှာပါ။...
Junior Win – Introducing Camus
ကာမူးကို မိတ်ဆက်ခြင်း ဂျူနီယာဝင်း၊ အောက်တိုဘာ ၁၊ ၂၀၁၃ Introduction Series (မိတ်ဆက်စာစဉ်) တွေကို စာရေးဆရာ ကိုတာက ဖေဖေဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်းထံကို ပို့ပေးထားတဲ့ထဲက Introducing Camus စာအုပ်ကို ကျွန်မ...
Junior Win – Dagon Taryar
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တောင်းဆိုသူ ဒဂုန်တာရာ ဂျူနီယာဝင်း၊ သြဂုတ် ၂၁၊ ၂၀၁၃ ဆရာကြီးဒဂုန်တာရာက ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတောင်းဆိုသူ၊ ညီညွတ်ကြဖို့ဆော်သြသူ။ ဆရာကြီးကွယ်လွန်သွားသောအခါ ဆရာကြီးအားချစ်ခင်ကြသူများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားသူများ၊ ညီညွတ်ဖို့ကိုအလိုရှိသူများရင်ထဲမှာ ဆရာကြီး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်။ ဆရာကြီးကတော့ သူ့အတွက် ပူဆွေးနေသူတွေ၊ ငိုကြွေးနေသူတွေကိုကြည့်ပြီး...
Junior Win – Farewell to Min Lu
ဆရာမင်းလူအတွက် နှူတ်ဆက်ဂါရ၀ဖြင့် ဂျူနီယာဝင်း၊ သြဂုတ် ၁၆၊ ၂၀၁၃ ဆရာမင်းလူ၏ စာပေရပ်တည်မူနှင့် ဆရာ့ယုံကြည်ချက်ရပ်တည်မူများကို လေးစားမိပါသည်။ ဆရာကွယ်လွန်သွားသောအခါ ကျွန်မ၏ရင်ထဲ ဆရာ့အကြောင်းများစဉ်းစားရင်း ဆရာ့အတွက် Henry Austin Dobson၏ “Friend And...
Junior Win – Maung Wuntha and A Poem
ဆရာမောင်ဝံသ ကွယ်လွန်ခြင်းအတွက် သတိရမိတဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ် ဂျူနီယာဝင်း၊ သြဂုတ် ၁၂၊ ၂၀၁၃ ဆရာကွယ်လွန်တယ် ကြားတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မရင်ထဲရောက်လာတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။ ဆရာ့ရင်ထဲကို ၀င်ကြည့်လို့ မရပေမယ့် ဒီကဗျာဟာဖြင့် ဆရာစိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်နေမယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်။ ကဗျာဆရာက...
Junior Win – 88 off the record
ကဗျည်းမတင်တဲ့ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်ကဗျာ ဂျူနီယာဝင်း၊ သြဂုတ် ၉ ၊ ၂၀၁၃ စည်းလုံးခြင်းအင်အားဆိုတာကို ငါတွေ့ခဲ့ရတာ ၈၈။ အနစ်နာခံခြင်းဆိုတာရဲ့သဘောတရား သဘောပေါက်ခဲ့ရတာ ၈၈။ အသက်ဆိုတဲ့အဖိုးတန်ရတနာကို စတေးဝံ့ကြတာကို ငါမြင်ခဲ့ရတာ ၈၈။ ဆုံးရှုံးမှု ဆိုတာ...
Junior Win – Get Well Soon, Saya Min Lu
ဆရာမင်းလူ နေပြန်ကောင်းပါစေ ဂျူနီယာဝင်း၊ ဇူလိုင် ၂၃၊ ၂၀၁၃ ကျွန်မကဆရာ့ရဲ့ပရိသတ်ပါ.။ ဆရာရေးတဲ့ အချစ်ဝတ္တုတွေနဲ့ တက္ကသိုလ်တက်ခဲ့။ ဆရာ့ရဲ့လှပသိမ်မွေ့တဲ့ စာသားတွေနဲ့ ကျူတိုရီရယ်ဖြေ။ ဆရာ့ဝတ္တုခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ဆရာ့ပုံသဏ္ဍန်ကို ပုံဖော်ရင်း ကြီးပြင်းခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မအကို...
Junior Win – Unforgettable (2)
မမေ့နိုင်စရာများ (၂) ဂျူနီယာဝင်း၊ ဇူလိုင် ၂၀၊ ၂၀၁၃ ဒီကနေ့က အာဇာနည်နေ့။ ကျွန်မအဘိုးအဘွားများ ပြောတဲ့နေ့ ငါတို့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ ကျဆုံးကုန်တဲ့နေ့၊ အသတ်ခံရတဲ့နေ့။ အခုဒီကနေ့ အာဇာနည်နေ့ ရောက်လာပြန်ပြီ။ မနေ့က စဉ်းစားနေတာ …...